Maitiro ekuisa iyo Atom kodhi mhariri pane Linux? | Linux Vakapindwa muropa
Atomu ndizvo yakavhurwa sosi sosi kodhi mupepeti ye macOS, Linux, uye Windows nerutsigiro rwema plug-ins akanyorwa muNode.js uye yakavakirwa-mukati yeGit vhezheni yekudzora, Yakagadzirwa neGitHub. Atom iri desktop application inovakwa uchishandisa matekinoroji ewebhu.
Panyaya yekuonekwa uye mashandiro, Atom yakavakirwa pane akati wandei maficha kune iyo Sublime Chinyorwa mupepeti inova sosi yakavharwa asi inonyanya kufarirwa zvinyorwa zvemadhizaini izvo zvinosarudzika nema programmer. Muchokwadi, Atom haisiriyo yega edhita dhizaini iyo yakafuridzirwa neSublime Chinyorwa.
Pindai izvo zvakakosha zvemupepeti zvatinogona kuratidza:
Muchinjikwa-chikuva rutsigiro: Windows, Linux uye OS X.
Iyo yakavakirwa-mukati package package
Split Atom interface pane akawanda mapaneru
Tsvaga uye kutsiva
atomu yakavakirwa paElectron uye yakanyorwa muCofiScript uye Zvishoma, Atomu inogona zvakare kushandiswa senzvimbo inosanganisirwa yekusimudzira nharaunda (IDE).
1 Maitiro ekuisa Atom pane Linux?
2 Maitiro ekuisa Atom muchiSpanish?
Maitiro ekuisa Atom pane Linux?
Nekuda kwekuzivikanwa kukuru mupepeti akawana munharaunda yeLinux mupepeti inogona kuwanikwa mukati mezvitoro zvezvimwe zvekugovera, kunyange zvisiri zvachose.
Saka kuti tiise mune yedu system isu tinogona kufanira kuwedzera mamwe ekuwedzera marekodhi.
Yenyaya yeUbuntu 18.04 uye zvigadzirwa tinogona kuisa Atomu nerutsigiro rwekuchengetedza kwayo isu tinofanirwa kuvhura terminal uye titevere inotevera rairo:
Iye zvino tinoenderera mberi nekuvandudza zvinyorwa.
Para nyaya yaDebian isu tinofanirwa kurodha pasi el inotevera dhiza package kuiisa nemirairo inotevera:
Nguva kuisa Atom pane Fedora 28, kuvhuraSUSE, CentOS zvigadzirwa uye chero kugoverwa nerutsigiro rpm mapakeji, isu tinofanirwa kurodha pasi iyo rpm package de iyi link
Uye iyo isu tinoisa nemirairo inotevera:
Muchiitiko cheArch Linux, Manjaro uye zvigadzirwa, tinogona kuisa kunyorera kubva kuArch's official repositories nemirairo inotevera:
Para zvakasara zvekugovera kana tichida kuisa mupepeti isu tinofanirwa kurodha pasi kodhi kodhi yeizvi uye nekuzvinyora muhurongwa, tinozvirodha pasi kubva iyi link
Zvakare cIsu tine mukana wekugona kuisa mupepeti nerubatsiro rweFlatpak Isu tinongofanirwa kuve nerutsigiro rweiyi tekinoroji mune yedu system.
Kuti uite izvi zvakapusa isu tinoita inotevera kuraira kuiisa kubva Flatpak:
Waita kuiswa kana Atomu isingawanikwi mukati medu rekushandisa menyu, Kuti vakwanise kuzviita, vanofanirwa kunyora unotevera kuraira mune terminal:
Uye ndizvozvo, isu tinokwanisa kutanga kushandisa iyi yakanaka, yakanyatsogadziriswa kodhi kodhi muchirongwa chedu.
Ndinofanira kusimbisa izvozvo mupepeti uyu wakagadzirirwa muChirungu nekutadza saka kana tichida kuishandisa muchiSpanish tinofanirwa kuita zvinotevera.
Maitiro ekuisa Atom muchiSpanish?
Isu tine mukana wekugona kuisa iyo Atom mupepeti mumutauro wechiSpanish kune avo vanoona zviri nyore kushanda naye.
Nokuda kweizvi tinofanira kuenda ku Mapakeji -> Zvirongwa Kutarisa y Sarudza sarudzo "Isa Mapakeji / madingindira".
Wanga uripo ngatitarise pasuru yacho atomu-i18n y tichaisa.
Waita kuiswa ikozvino tichaenda kumenu in "Settings" uye ipapo tinoshandura mutauro Kubva kuChirungu kuenda kuSpanish, zvaita izvozvi isu tichavhara mupepeti kuti shanduko dziite uye isu tichaivhurazve kuti tione kuti mupepeti atove muchiSpanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maitiro ekuisa iyo Atom kodhi mhariri pane Linux?
ruzivo rwakanaka kwazvo rwakajeka uye rwakajeka
OpenSUSE Leap15 yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa